Taageerayaasha Juventus oo baraha bulshada baallaha uga rifay Dani Alves + Sawirro (Maxay ku maageen?) – Gool FM
Raage March 7, 2018
(Torino) 07 Maarso 2018 – Daafaca dadabka midig ee kooxda PSG Dani Alves ayaa xagaagii dhowaa kansalay sanad ka haray qandaraas 2 sanadood ahaa oo uu kula jirey Juventus si uu aado kooxda PSG.
Yeelkeede, kaddib tegistiisii ayuu aad uga caraysiiyay taageerayaasha kooxdii uu sanad la joogey ee Juve kaddib markii uu caddeeyay sababta uu uga tegey kooxdaasi.
”Waxaan PSG ugu biiray inaan ku guulaysto Koobka Horyaallada Yurub” ayuu ku qiil samaystay, wuxuuna warkaasi raacay mid kale oo isla isaga laga soo sheegay oo ahaa inuu Dybala kula taliyay inuu Juve iskaga tago haddii uu doonayo inuu horumar ka sameeyo kubadda cagta.
Haatan, taageerayaasha Bianconeri iyo kuwo kale oo u ciil cunsanaa ayaa baraha bulshada baallaha uga rifaya kaddib markii ay kooxda PSG wareegga 16-ka uga hartay CL iyadoo ay 5-2 iskugu dardartay kooxda Real Madrid.
Hoos ka eeg sawirradii iyo qoraalladii ay ka sameeyeen ee maadda ahaa….
Taageerayaasha Liverpool oo arin aad loogu amaanay sameeyay kulankii xalay ee FC Porto